Ghọta. Bụrụ na Brand. Nwee ntụkwasị obi. | Martech Zone
Ghọta. Bụrụ na Brand. Nwee ntụkwasị obi.
Monday, July 27, 2009 Tọzdee, Septemba 19, 2013
Ọ bụ ezie na usoro ịre ahịa ntanetị nwere ike ịbụ ihe jụrụ oyi karịa ụfọdụ mgbasa ozi ochie na-agwụ ike, ihe ahụ dị jụụ anaghị enyere gị aka ịrụ ọrụ akara ngosi. Mmetụta aka niile bụ ohere dị ukwuu iji nwekwuo ịhụnanya gị na ndị ị na-ege ntị.
Ghọta otu onye si na mkparịta ụka nke ọzọ na-eji teknụzụ dijitalụ ahụ. Kedu ọkwa ọ na-emeghe iso gị nọrọ n'akụkụ a? Ọ bụrụ na ọ na-arụsi ọrụ ike ịlele email ya n'oge ụbọchị azụmaahịa tupu ọ banye ọsọ ọsọ na nzukọ atọ, ọ chọrọ ka ị na-eku ume n'olu ya na onyinye na-adịghị mma? Ihe ọmụma bara uru, ihe ị maara na ọ chọrọ, ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị? Enwere ike. Eleghị anya ọ bụghị. Chọọ ịghọta. Ma jirizie nghọta gị mepụta ozi ahụ ma jiri mgbasa ozi rụọ ọrụ nke ọma.
Na-eme omume mgbe niile n'ụzọ kwekọrọ na nkwa na njirimara gị. Nchịkwa ika abụghị naanị ijide n'aka na akara ngosi gị gosipụtara ebe kwesịrị ekwesị ma jiri agba dị mma oge niile. Ihe ndị ahụ nwere ike inyere aka. Karịsịa, akara aka ọ bụla bụ ohere iji gosipụta akara gị ma kwado ma ọ bụ mee ka ntụkwasị obi sikwuo ike. Ihe a na-asọ oyi nke a tụlere n'elu na-agbanwe agbanwe na akara gị? Ọ bụrụ na mkparị na ọgbaghara bụ akụkụ nke ika gị (jisie ike na nke ahụ), nyezie ya. Ma, ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị maara gị dị ka ihe dị iche, megharia nkwukọrịta gị. Ihe ọ bụla ị na-eme, mara onye ị bụ na ihe ị kwụ ọtọ wee nyefee akara ahụ iji wulite ntụkwasị obi.
Ghọta otu ndị na - ege ntị si emekọrịta na mgbasa ozi na ozi ị na - ewepụta. Emeghị ọrụ ahụ naanị n'ihi na ị kwagoro. Jiri data, dialog, ma ọ bụ nzaghachi ọ bụla ị ga-aghọta banyere omume ndị na-ege gị ntị wee mezie atụmatụ gị, atụmatụ gị na ogbugbu gị.
Tags: Njikọ ụwaemume ezumikepinterest nkwalitengwaọrụwireframe ngwaọrụyuri wright
Julaị 27, 2009, elekere 9:16 nke ehihie
Ezigbo post, Nila! Ọtụtụ ndị mmadụ na-echefu na ndị na-ege ntị bụ isi ihe maka atụmatụ ọ bụla nke ika. Daalụ nke ukwuu maka ikesa nke a!